पलाँस : रेखा थापाको दोस्रो डेब्यु ?
By Bisnu Sharma on	 19th March 2017 समिक्षा
चैत १८ ट्रेन्डसेटर बन्नसक्छ । चासो भनेको यो मितिमा रिलिज हुने सिनेमा ‘पलाँस’लाई लिएर हो । क्रिटिक्सले फिल्मलाई रेखा थापाको दोस्रो इनिङको रुपमा चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् ।
दुई दशक हिरोइनइज्म स्थापित गरेकी रेखा पलाँसमा एन्टी–हिरो बन्दैछिन् (भिलेन चाहिँ फिल्म नहेरिकन नभनौं) । ट्रेलरमा उनको एक्सन प्याक्ड लुक्स र रेडलाइट एरिया संचालिका पात्र महसुस गर्न सकिन्छ । के रेखा बदलिएकी हुन् ?
ट्रेलर हेर्दा निर्देशकले रेखाको नकारात्मक पात्रलाई प्रेम र संवेदना घोलेर सकारात्मकतातर्फ रुपान्तरण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । हामीले अहिलेसम्म महिला एन्टी–हिरो भएको फिल्म हेरेका छैनौं । दर्शकका लागि पनि यो नयाँ पात्र स्थापना हेर्दा रोचक लाग्न सक्छ ।
निर्देशक सुवास कोइरालाले रेखा थापालाई भर्सटाइल स्वरुप दिलाउन खोजेजस्तो लाग्छ । उनले मुलधारको ट्रेन्डबाट पछि हटेर रेखालाई भिन्न पात्रमा उभ्याउन खोजेका हुन् ? स्क्रिप्ट हेरेपछि उक्त रोल गर्न रेखाको स्वीकारोक्तीको अर्थ पनि उनी अब स्टेरियोटाइप रोलबाट मुक्त हुन चाहन्छिन् भन्ने हो ।
रेखा सुरुआतमा लभरगर्ल बनिन् । त्यसपछि विद्रोही र एक्सन । यी दुबै पात्रमार्फत उनलाई बजारले चाख्यो । अब, पलाँसमा उनको नयाँ स्वरुपलाई कसरी लेला बजारले ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न बन्नसक्छ । पलाँस उनका लागि सम्भावना र चुनौति पनि हो । एक हदसम्म रेखाको फरक पात्रात्मक चरित्रको निक्र्यौंल पलाँसले गर्नेछ ।
रेखा ग्रे क्यारेक्टरका लागि खेल्न किन राजी भइन् ? सम्भवतः उनी अब पुरानै तरिकाले अघि बढ्न चाहँदिनन् । या, उनलाई अब मुलधारसँग मोह टुटेको हो ? के रेखा अब पपुलर फिल्म निर्माणबाट विशुद्ध फिल्म निर्माणतर्फ अघि बढ्न चाहन्छिन् ? सम्भवतः यी प्रश्नहरुको उत्तर पलाँसले चैत १८ गते पेश गर्नेछ । अर्कोतर्फ, एकल रिलिजको फाइदा बक्सअफिस क्वीनलाई मजाले मिल्न सक्छ ।
६ वर्षपछि कमब्याक निर्मात्री कृषा चौलागाइँ पनि एकल रिलिजको यो मौकाबाट आशावादी छिन् । अर्कोतर्फ साइडमा कामेश्वर चौरासिया र अयुव केसी छन् । पलाँससँगको मुख्य अपेक्षा भनेको रेखा थापा हुन्, बक्सअफिस प्रदर्शन भिन्न पाटो हो ।